2 မာ 2017
မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့် Red Hat Certified Engineer အသိမှတ်ပြုလက်မှတ် Get မှ
အဆိုပါ Red Hat Certified Engineer အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤတွင် RHCSA စာမေးပွဲသင်တန်း၏အောဖြစ်ပါသည်:
အဘယ်ကြောင့် Red Hat Certified Engineer အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည်လား?
တစ်ဦးက Red Hat Certified Engineer (-RHCE) အရည်အချင်းများ Red Hat Enterprise ကိုLinux® (RHEL) မူဘောင်များအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦး Higher-positioning ကိုမူဘောင်စီမံခန့်ခွဲသူ၏လိုအပ်သောအပိုဆောင်းစွမ်းရည်, သတိနှင့်စွမ်းရည်ရှိပြီးသူတစ်ဦး Red Hat Certified System ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (RHCSA) ကလုံခြုံနေသည် ။ သငျသညျ RHSCA ဘို့ပြင်ဆင်နေတွေ့ကြုံခံစားနှင့်သင့်အသိအမှတ်ပြုအနိုင်ရတစ်ချိန်ကသင်တစ်ဦး-RHCE သို့လှည့်နိုင်ပါတယ်။
RHCSA အသိအမှတ်ပြုသည့် Red Hat ထိုညီအစ်ကိုကနေအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုအရည်အချင်းများအကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, Red Hat တစ်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်၏အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုပြီးနောက်ကတိသစ္စာပြုစာမေးပွဲပေးထားပါတယ်။ ဤသည်ပြင်ဆင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမ်းဆည်းခြင်း, နှင့်အခြေခံလုံခြုံရေးအစီမံခန့်ခွဲမှု၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီး, ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုအောင်, တပ်ဆင်ခြင်းများအပါအဝင်အရေးပါသော Linux ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များဖျော်ဖြေနှင့်အတူသိမ်းပိုက်နေသောနေရာများတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုကျော်အိုင်တီအထူးကုဘို့စီစဉ်ထားသည်။
သငျသညျအဖြစ်ထင်ရှားစွာတစ်-RHCE တက်အဆုံးသတ်ရန်ကြိုးစားသောဖြစ်ရပ်၌, သင် Red Hat ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားနှင့်သင့်ဒေသအတွက်လုပ်ဆောင်ပြင်ဆင်နေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာသင့်၏။ သင့်အနေဖြင့်အထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုဆက်သွယ်နှင့် RHCSA အဘို့ဆီအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Red Hat Certified Engineer စာမေးပွဲဖြေဆိုရှင်းလင်းဖို့, သင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်၏ဘာသာရပ်များအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းနှင့်ဥပမာများအပြင်မတူညီတဲ့ထောင့်, ကွန်ယက်အစီအမံများ၏အစီအစဉ်အတွက်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအသင်းဖော်များကပေးသောပြင်ဆင်မှုပစ္စည်းများနှင့် courseware အတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏မျက်နှာသာအချိန်ဇယားအပေါ်တစ်ဦး Red Hat အတည်ပြုချက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုတက်သည်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုထုတ်ကုန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်စမ်းသပ်ခြင်းအာရုံစိုက်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမူဘောင်ပေါ်ညွှန်ကြားထားသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ရွေးချယ်မှုပြင်ဆင်နေကွဲပြားခြားနားသော Red Hat မှာ gander ယူ. မစိုက်သင့်ရဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုအစည်းအဝေးများစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
RHCSA စာမေးပွဲသင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမရှိမဖြစ်တာဝန်ခံလိုင်းထင်မြင်ချက်နှင့်အပိုအကျိုးတူအဆင့်အထိကိရိယာများ၏တင်ပြချက်မှတဆင့် Linux ကိုမူဘောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတက်အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေမျှော်လင့်ချက်မှအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပေးသည်။ ဤရွေ့ကားယူဆချက်နောက်ထပ်ပူးတှဲစီမံကိနျးကို, Red Hat စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး II ကိုအတွက်ကိုဆန့ ်. နေကြသည်။
ဆော့ဖျဝဲဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် configuration သင်ယူခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များ Administrating နှင့်စောင့်ကြည့်
RHCSA အတည်ပြုချက်ကိုတစ်ဦး-RHCE သို့လှည့်ဖို့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Red Hat အတည်ပြုချက်ကိုသင်တန်းသူတို့ရဲ့အိုင်တီအခြေခံအုတ်မြစ်အတွက် RHEL execute သူကို virtualization နဲ့ cloud အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, သျောလညျးအထူးကု, မူဘောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, လျှောက်လွှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, စီစဉ်များနှင့်အကျိုးတူဒီဇိုင်နာများအပေါ် concentrates ။ အဆိုပါသင်တန်းကိုပြိုင်ဘက်သေဒဏ်စီရင်၏အလငျး၌ကတိသစ္စာပြုစာမေးပွဲတောင်းဆိုနေဖြင့် RHEL အတွက်အဖြစ်ထင်ရှားစွာတတ်ကျွမ်းဖြစ်ရအာမခံပါသည်။ Red Hat အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲကိုဖြတ်သန်းများ၏နိုးထခုနှစ်, သင်တစ်ဦး Red Hat ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမာစတာအတည်ပြုရယူဖို့။ ဤသူသည်သင်တို့က, Red Hat ကလူအုပျစုအောင်မြင်ရန်အလားအလာအကြီးအကဲတွေနှင့်အတူချိတ်ဆက်, frame ကိုအာရုံပြုစုဝေးများနှင့်လုပ်ငန်းများအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
အချို့အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများဖြည့်ပါ-in-the-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိကျတဲ့တီထွင်မှုမှလေးစားမှုနဲ့အတူသို့မဟုတ်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုမေးနေစဉ်, Red Hat စိတ်ထဲအတွက်၎င်း၏စာမေးပွဲရှင်းလင်းရန်အဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုစောင့်ရှောက် Red Hat နိုင်စွမ်းလျှောက်ထားစစ်မှန်တဲ့တာဝန်တွေကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားလိုအပ်နေပါသည်။ ဒီသင်တန်းကိုမထောက်ခံကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြားမှအလုပ်လုပ်မူဘောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆက်စပ်အသိပညာအဖိုးတန်တဲ့အကြီးအဒီဂရီမှဖြစ်လိမ့်မည်။
RHCSA များအတွက် Lab မှတက် Set ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | RHCSA Lab က